Koox hubeysan oo weerar aan caadi ahayn ku qaaday xarunta jaamacadda SIMAD ee magaalada Muqdisho – Bulshoweyn Online | Your Source Of News And Entertainment
Koox hubeysan oo weerar aan caadi ahayn ku qaaday xarunta jaamacadda SIMAD ee magaalada Muqdisho
Koox hubeysan oo ku labisneyd dharka ciidanka dowladda federaalka Soomaaliya ayaa maanta weerar xoogan ku qaaday xarunta Jaamacadda SIMAD ee magaalada Muqdisho, iyagoona xilligaasi argagax geliyay ardaydii dhiganaysay jaamacadda.
Kooxdaan oo tiro ahaan gaaraya ilaa 6 nin ayaa la sheegayaa inay gudaha u galeen Jaamacadda SIMAD, xilli ay halkaasi ka socotay duruus, islamarkaana ay saacadu ku beegnayd abaarihii 1-da duhurnimo.
Gudoomiyaha jaamacadda SIMAD Daahir Xasan Cabdi (Daahir Carab) oo la hadlay idaacadda VOA-da laanteeda afka Soomaaliga ayaa sheegay in kooxda hubeysan ay gudaha usoo galeen jaamacadda, iyagoo soo eryanaaya arday ku sugneyd dibadda hore ee jaamacadda.
Kooxdaasi ayuu sheegay inay xilligaasi rasaas kor u ridayeen kadibne ay gudaha usoo galeen jaamacadda, taasoo qal-qal ku beertay ardayda ku sugnayd jaamacadda.
“Runtii ma jirto cid ardayda ka mid ah oo dhaawac soo gaaray, balse dhacdadaan waxay ardayda u keeni kartaa dhaawac dhanka maskaxda ah, maxaa yeelay weli ma arag arrin noocan oo kale ah” Sidaas waxaa yiri gudoomiyaha jaamacadda SIMAD Daahir Xasan Carab.
Kooxihii weerarka kusoo qaaday Jaamacadda ayaa la sheegayaa inay markii dambe isaga baxeen jaamacadda islamarkaana ay xaaladdu caadi kusoo laabatay.
Ciidamada ka tirsan kuwa ammaanka ee dowladda federaalka Soomaaliya ayaa soo gaaray goobtaasi, waxayna halkaasi ka sameeyeen baaritaano, inkastoo aan la ogeyn waxa uu baaritaankaasi kusoo dhamaaday.
Ardayda dhigata jaamacadda SIMAD ayaa dhowr jeer hore cabasho ka gudbiyay kooxahaan ku labisan dharka ciidanka dowladda Soomaaliya oo xilliyada qaarkood teleefanada ka qaata markii ay jamaacadda usoo socdaan
Si kastaba, weerarkaan ayaa noqonayaa kii ugu horeeyay ee ka dhaca jaamacada SIMAD xarunteeda magaalada Muqdisho, waxaana ilaa iyo haatan jirin cid weerarkaas loo soo qabtay ama lagu tuhmaayo.